Ndezvipi zvishandiso zveku Amazon zvinogona kukubatsira iwe kutanga yako yebhizimisi bhizinesi?
Usati watanga kutengesa vashandi vako kuAmazon, unoda kuziva mamwe mitemo uye mazano ekuti uve mutori wenharaunda mumakwikwi ecommerce game.
Amazon ndiyo yekutengeserana kwenyika yose yebhizimisi mabhizinesi ekutambisa vashandi vavo uye kuwedzera mari yavo yebhizimisi mari. Zvisinei, usati watanga rwendo rwako rwekutengesa pane iyi inonakidza uye inobatsira chikwata, regai tipindure mimwe mibvunzo pamusoro pezvinyorwa zvepuratifomu ino uye towana mamwe akakodzera Amazon tracking zana kugadzirira bhizinesi rako kuti ribudirire.
Zvakakosha zvekutengesa uye kuisa maitiro kuAmazon
Kana munhu anotsvaga aisa mubvunzo mu Amazon search box, anowana runyoro rwe mhinduro yake yezvinhu. Zvadaro anoenda kune imwe yemapeji ezvigadzirwa uye achitsvaga pane "zvipo" zviri pasi apa tsanangudzo yezvakagadzirwa kuchengeta huwandu hwezvinowanikwa zviripo nechigadzirwa ichi.
Uyezve, Amazon inopa vashandisi mukana wekukwanisa kubhadhara "Bhokisi Rokutenga" rakashandurwa - graintrac software. Maererano nenhamba ye data, zvinodarika madhora mabhiriyoni makumi matanhatu nemadhora zvinotengeswa kuburikidza nebhokisi rekutenga. Ndokusaka zvakakosha kuziva kuti zvinoshanda sei.
Kazhinji kutaura, kutenga bhokisi ikadhi rekutengesa iro rinowanikwa pane imwe tsanangudzo yemiti yepamusoro apo vatengi vanogona kutanga kutenga nzira.
Haisi mishonga yose inogona kuwanikwa muBhokisi rekutenga sezvo Amazon inosarudza chete zvakanakisisa zvido pamusika kuti uve nechokwadi chokuti mutengi achatenga. Kukunda Amazon Bhokisi Bhokisi, unoda kupa vatengi vako mari yakanakisisa pamusika, vane zvinhu zvakanaka, kutumira pachena, uye mifananidzo yemhando.
Zvakakosha kutaura kuti zvakajeka hazvina musoro kufunga kuti nzvimbo yako inogara ichitsvaga yakakwana kusvika pakuve mutengesi. Iwe unoda kushanda zvakaoma kwete neAmazon yako peji peji asiwo pasi pe ecommerce maitiro akanaka kukunda vatengi vatsva. Zvinhu zvinogona kukanganisa nzvimbo yako yezvigadzirwa zvekushandisa uye kukwanisa kukunda Bhokisi Rokutenga rinosanganisira:
Icho chirevo chakaoma chinosanganisira zvose zvinotengeswa uye zvinotumira mari . Icho chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha zvinoshandiswa zvinokanganisa mazita epamusoro peji uye kutendeuka..
Chipo chinonyanya kukosha
Kukwira kuTAT, unoda kupa vashandisi veAmazon nekanakisisa kupa pamusika wako.
Mutengesi weAmerica muAmerica ane pamusika
Vatengesi veIndaneti vane kwenguva yakareba uye vakatengesa mbiri dzekutengesa nema Amazon vane mikana yekuwana imwe yenzvimbo dzakakwirira.
Nhamba uye hutano hwevadzidzi vanoongorora
Zvinonyanya kukosha pakutevedza kutengesa uye zvinogona kukubatsira kuti ubatsire kutenga bhokisi.
Zvino, paunenge uine maonero ekuti Amazon inoronga sei masangano emabasa, unogona kutanga kusimbisa bhizimisi rako rekudhipiti pachikuva. Zvisinei, kuti uite nyore uye ushandise izvi, unofanira kuziva kuti ma Amazon mabhuku anotsvaga anogona sei kusangana zvakakwana nebhizimisi rako rinodiwa.
Tsvakurudzo yakakosha kukubatsira iwe nhamba apo maitirwo emitambo yako yakakosha kune zvakasiyana-siyana zvakakosha mazwi. Ichi chishandiso chekutsvaga chichakubatsira iwe kuchengetedza nguva yakawanda uye kukupa nemigumisiro yakarurama kwazvo. Ichakupawo ruzivo rwakasimba pamusoro pekunge kuchinja kwawakaita, kukurisa nzvimbo yako kana kwete. Uyezve, iwe uchakwanisa kutarisana nemakwikwi ako nzvimbo dzepamusoro.
Chirongwa ichi chakagadziridzwa kugadzirisa Amazon yako peji SEO uchishandisa kutyaira motokari kune peji rako. Inobatsira kukwidziridza nzvimbo yako yePaul peji paGoogle SERP uye kuyendesa chitima kwairi. Uyezve, kutenga Semalt kubhadhara kwechigadziro ichi iwe uchawana kutengesa-kuumba mazano ezvinyorwa zvemashoko, kushanda kunobudirira kwekuvaka chikwata uye kuwedzera kwekusimudzirwa kwekusimudzira.